musha Classic FOOTBALLER Ricardo Kaka Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhora Legend iro rinonyatsozivikanwa nezita reNickname; "Kaka". Nhoroondo yedu Ricardo Kaka Childhood pamwe Untold Biography Facts inounza iwe zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva ino. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hukama hwehukama, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF-Pitch zvishoma zvisingazivikanwi pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoziva nezvekwanisa kwake asi vashomanana vanofunga nezveRicardo Kaka Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Ricardo Kaka Utano Hwokuverenga Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Ricardo Izecson dos Santos Leite AKA 'Kaka' akaberekwa musi we 22nd musi waApril 1982 muBrasília, Federal District, Brazil.
Akaberekwa kuna amai vake, Simone dos Santos (aimbova mudzidzi wepachikoro chekutanga) naBosco Izecson Pereira Leite (mujeri wehurumende).
Akanga ave nemari yakachengetwa yakachengeteka iyo yakamubvumira kuisa pfungwa pane zvose chikoro nebhola panguva imwe chete. Paakanga ava nemakore manomwe, mhuri yaKaká yakatamira kune São Paulo.
Sezvakawanda pamberi pake, Kaka akawana mubhokisi mutambo waaida. Chikoro chake chekutanga chakawana tarenda yake ndokumugadzirira mukiki yekambani yepaduku inonzi "Alphaville,".
Ricardo Kaka Boyhood nguva
Kaka akaita chikwata chake chichikwanisa kuguma pakupedzisira munharaunda yavo yekune imwe nyika. Izvi zvakamuita kuti awedzere kuongororwa nekambani yemusha São Paulo FC, uyo akamupa nzvimbo muchechi yechidiki. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Ricardo Kaka Utano Hwokuverenga Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Kaka akasangana nehutano hwake mudiwa Caroline paakanga ari 15 uye akanga ari 20 panguva iyoyo.
Izvi zvakaitika muna 2002, paakanga achiri kuchikoro Bhuraziri. Vakawira pasi murudo kune mumwe nemumwe. Kunyange kure kure (muzviuru zvemakiromita) hazvina kukwanisa kuzvitsaura. Vose vakatanga ukama hwavo hwakakomba pane imwe nguva Kaká akanga asiri kutamba AC Milan. Paakanga achiri kure, Celico akabatana nechechi yeKaka Bhuraziri uye gare gare vakava mufudzi, vose nekuda kwerudo rwechiKristu rwekomana.
Chokwadi, Caroline akanaka kwazvo, akatendeka uye muKristu akazvipira. Kaka famously akashevedzera kuti vose ava vaiva mhandara vasati vasarudza kwaari.
Vakaroora paC23rd yaDecember 2005 paRubhedheni yakakurumbira munaKristu chechi muSão Paulo.
Murume nemudzimai vane vana vaviri: mwanakomana Luca Celico Leite (akaberekwa 10 June 2008) uye mwanasikana Isabella (akaberekwa 23 April 2011). Vose vari pedyo zvikuru nababa vavo sekuonekwa pasi apa.
Kaka nevana vake
Ricardo Kaka Utano Hwokuverenga Plus Untold Biography Facts -Dharuro Nyaya
Muna 2015, Kaká naCelico vakataura kurambana kwavo kuburikidza nehupfumi. Mumashoko ake ..."Tinoda kuratidza pachena kuti, mushure memakore mapfumbamwe pamwe chete, tave tichibvumirana kurambana. Imba yedu yatipa isu vaviri vana vakanaka vatinoda zvikuru. Mukuona kwezvakakosha zvisungo, ticharamba tine, ruremekedzo, kuvonga, uye kukudzwa kune mumwe nemumwe zvinoramba zvakabatana. Tinokumbira tsitsi yako nekunzwisisa kuchengetedza ushamwari hwedu munguva yakadaro yekuchinja. "
Wake Akambova mudzimai wake Celico zvakare akazarura ... "Kana munhu achibiridzira, chiratidzo chokuti mudzimai wake akundikana." Mashoko ake akapa vateki vaKaka ruzivo rwechikonzero chakaita kuti varambane uye nei vakarambana.
Nhoroondo yaCaroline yokurambana kwake
Pana 24 December 2016, Kaka akasimbisa kuti ari kufambidzana neBrazil model Carolina Dias mune mharidzo kune vateveri vake 9.8million pa Instagram.
Uchapupu hwekuti Kaka akaenderera mberi
Ivo vaviri vakapinda muchato waLucas Moura muSao Paulo.
Uyewo Pakupedzisira 2016 mushure memwedzi yekufungidzira, Caroline Celico akasimbisa zvakasimba kuti iye zvino ari muukama nebhizimisi reBrazil Eduardo Scarpa. Kaka akafadzwa paakaona mufananidzo wemuimbova mudzimai wake uye nhamba imwe muvengi waainazvo. Eduardo anoita seari kunyatsotarisira rudo rwake rutsva.
Uchapupu hwekuti Caroline Celico akaenderera mberi
Ricardo Kaka Utano Hwokuverenga Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
BABA: Baba vaKaka, Bosco Izecson Pereira Leite mutengesi wehurumende akatora muchengeti wepakati peboka remhuri. Akaita kuti vanakomana vake vaviri (Kaka uye Digão) vave nekurerwa kwakakodzera. Vakanga vasipo kurera kubva paurombo. Akavapa dzidzo yakanaka uye mukana wekusarudza uye kurarama mararamiro avo emabasa. Pasi iri Bosco Izecson Pereira Leite uye mwanakomana wake wokutanga, Little Kaka.
Bosco Izecson Pereira Leite nediki Kaka
AMAI: Kaka's mum; Simone dos Santos ndiye mudzidzisi wechikoro chepurasti yepuraimari uye anovaka hukama hwakanaka pakati pake, Kaka nevamwe vose vemhuri yake. Kuva mudzidzisi wepachikoro chekutanga kuchiita kuti awane kunzwisisa kwakanaka kwemhuri yake simba. Simone dos Santos iri shure kweKaka pedyo naMwari. Vose vari pedyo zvikuru sekuonekwa mumufananidzo uri pasi apa.
Kaka naAmai- Simone dos Santos
HANZVADZI KONAMA: Rodrigo Manuel Izecson dos Santos Leite (akaberekwa 14 October 1985), anozivikanwa seGigão, Brazilian retired professional footballer uye chete mukoma weKaka. Akatamba semudziviriri wepakati panguva yemabasa ake mazuva.
As Bleachers Report anozviisa, Digão iri pakati pezvinyorwa zvepasi rose-10 vakomana vekukwikwidza avo vasina kuzviita mubasa ravo. Digão yakadanwa AC Milan kwegore asati adzokera kunyika yeAmerica kuti aenderere mberi nebasa rake rakakundikana.
Kusvikira musi, anoonekwa seanonyanya kushamwaridzana mutambi wekuti atsike netsoka paSerie A pitch. Vamwe vomufungu vanoti ndiye anonyatsopesana (antony)) Kaka munzira dzose zvinogoneka. Zvinotyisa, Digão yakaridza mimwe mitambo ye38 mubasa rake rose pasina kuisa chinangwa. Akasimuka paaiva muduku we 32 aona bhora rakanga risati riri kudana kwake.
Chii chinorasikirwa mubasa rake chakawana muhupenyu hwake hworudo. Ari kufara akaroorana nemuumbi weRebeca Sabino. Kaká akanga ari godfather wemuchato.
Ricardo Kaka Utano Hwokuverenga Plus Untold Biography Facts -The Swimming Pool Accident
Pazera remakore 18, Kaká akatambura nehupenyu uye zvichida kuora mutezo-kukonzera kuputika kwepamuviri semugumisiro wegungwa rekushambira.
Nenzira yakanaka, akazogadzirisa zvizere. Anofunga kuti akadzorera kuna Mwari uye kubva ipapo akatora mari yake kuchechi yake.
Ricardo Kaka Utano Hwokuverenga Plus Untold Biography Facts -Kubva Nickname
Munun'una wake Rodrigo (anonyanya kuzivikanwa seGigão) uye cousin Eduardo Delani vadzidzisi vemauto.
Digão akamudana "Caca" nekuda kwekusakundikana kwekutaura "Ricardo" pavakanga vachiri vaduku. Kushaikwa kwemazita ekupedzisira kwakaguma kuine zita 'Kaká '. Zita racho 'Kaka' haina shanduro chaiyo yechiPutukezi.
Pasi pane mufananidzo weKaka nemukoma wake mukomana pavakanga vari vana.
Little Kaka uye Digão
Ricardo Kaka Utano Hwokuverenga Plus Untold Biography Facts -Kutenda Kwake
Kaká muKristu muevhangeri anozvipira uyo aiva nhengo inoshanda yeSão Paulo-based Rebirth munaKristu Church.
Akave akabatanidzwa nechitendero pazera re12: "Ndakadzidza kuti kutenda ndiko kusarudza kana chimwe chinhu chichiitika kana kwete." anodaro Kaka.
Iye anozivikanwa kuti kazhinji akabvisa jeresi yake kuti azarure yake "Ndiri waJesu T-shirt. Kaka ave zvakare ave achinyatsobatanidzwa mumunyengetero nguva mushure mekupedzisira kwekumhanya kwemitambo. Izvi akazviita mushure meBrazil yeChina Cup Cup, Milan's 2004 Scudetto uye 2007 Champions League inokunda.
Munguva yemhemberero yekutsvaga mutsva mushure mekuBlozil ya4-1 kukunda kuArgentina mune 2005 Confederations Cup pakupedzisira, iye nevamwe vanoverengeka vevadzidzi vake vaipfeka T-shirts iyo yaiverenga "Jesu Anokuda" mumitauro yakasiyana-siyana.
Paakagamuchira FIFA World Footballer yeGore mubairo muna 2007, akati achiri muduku aida kungova mutambi wechikoro cheSão Paulo uye kutamba mutambo mumwe chete Bhuraziri tende rwenyika, asi izvozvo "Mwari akamupa [kupfuura] zvaakambokumbira."
Kusvikira musi, Kaká ainakidzwa nemimhanzi yemhando yevhangeri uye bhuku rake raanoda rinoramba riri Bhaibheri. Mubvunzurudzo pamwe Brazilian terevhizheni O Globo, Kaka akaratidza kuda kwake kuva mufundisi weevhangeri shure kwekurega basa.
Ricardo Kaka Utano Hwokuverenga Plus Untold Biography Facts -Zvaanoyeukwa nokuda
Nokuti kuzvidzivirira kwake-kuparadzaniswa kunopfuura.
Nokuda kwekukuvara, akatambura pa Real Madrid.
Nokukurumidza, kusimba, kubata uye kushanda nesimba.
Nokuva mutambi wechikwata chekusika nekumhanya kukuru, tsoka dzakanaka, uye kukwana kwakakwana.
Nokuda kwake kukwanisa kubvisa vadziviriri vekare.
Nokuva mutungamiri wevanopikisa uye nekusika mikana.
Nokuda kwekuri chirango chakarurama taker.
Nokuda kwekuita basa rakadzika pakati pemiti-muiti.
Tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!
Krzysztof Piatek Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Andre Silva Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Andrea Pirlo Mwana weChiitiko Plus Untold Biography Facts